Hetsika maro loha no entin’izy ireo hanamarihana izany toy ny fanampiana ny ray aman-dreny amin’ny fikoloana ny menaky ny ainy hahatonga ireto farany ho olom-banona. Tafiditra ao ny fiverenan’ilay fandaharana amin’ny fahitalavitra iray eto amintsika mitondra ny lohateny hoe : “Tiako ny zanako” rehefa niato enin-taona lasa izay. Hirotsaka an-tsehatra amin’ny fanabeazana ireo tovovavy tanora tsy ampy taona dia mitondra vohoka ihany koa ny Primababy izay nomarihin’ny tompon’andraikitra fa be dia be tokoa eto amintsika. Namoaka ilay guide Prima baby mirakitra ireo torolalana sy torohevitra ho an’ny ray aman-dreny izy ireo omaly, tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny iray volan’ny ankizy. Andiany fahafolo izy ity izay vidiana amin’ny sarany 2.000 Ar ka ny 20% amin’ny vidiny dia hampidirina ankizy sahirana any an-tsekoly sahanin’ny fikambanana “Clair de Lune” sy ny Centre I2M eny Ambohibao. Ho hita ao anatin’io boky io avokoa moa ny fomba fitaizana ny ankizy, ny sakafo tokony hohaniny, ny fianarana tokony holalovany….